Mmetụta nke COVID-19: Nsogbu Nsogbu na Atụmatụ Ọdịnihu
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Nchedo njem na Mberede » Mmetụta nke COVID-19: Nsogbu Nsogbu na Atụmatụ Ọdịnihu
Akụkọ Bahrain na -agbasa • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Akụkọ Ọchịchị • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
mmetụta nke COVID-19
Mmetụta nke COVID-19 egosila n'ụzọ siri ike adịghị ike nke mpaghara ndị njem. N'iburu ọrịa zuru ụwa ọnụ, ezi uche sitere na njem ata ahụhụ nke ukwuu. Mbibi a na-achọ na mgbakwunye na njigide nke njem nlegharị anya nke ụwa emeela ka ọtụtụ ndị na njedebe nke ọkwa ọrụ nke ụlọ ọrụ n'ihe ize ndụ nke oke ịda ogbenye.
The Nationstù Na-ahụ Maka Njem Nleta Worldwa nke Mba Ndị Dị n'Otu (UNWTO) nwere ụkpụrụ omume dị mkpa iji nyere aka belata ọnọdụ ha. Ọ bụ ezie na ọ bụghị otu ego na-akwụ ụgwọ n'onwe ya, UNWTO ga-achọ iji hụ na ụlọ ọrụ ndị ahụ na-achịkwa akụ maara nke ọma ọnọdụ na ihe isi ike ọtụtụ ndị a chere ihu - ma nye ndụmọdụ maka usoro enyemaka kwesịrị ekwesị.
Nye ga-edu anyị?
Bahrain ahọrọla HE Mai Al Khalifa dị ka onye ga-emecha mezuo ọkwa nke Secretary General nke UNWTO. Nhọpụta ya bụ n'ihi na Bahrain kwenyere na site na ahụmịhe ya, ahụmịhe ya, na ihe ọmụma ya, ọ bụ onye ga-enwe ike iduzi njem nleta na nsogbu a zuru ụwa ọnụ.
HE Mai Al Khalifa kwuru, sị: “N’akụkụ a dị mkpa iji duzie njem nleta na ọrịa COVID-19, kwesịrị ịbụ mkpebi siri ike iji nyere aka ịchekwa azụmaahịa ndị bara uru. Enyemaka ga-adabere na nke mbụ na ụlọ ọrụ ndị na-enye iwu maka akụ. Ọtụtụ gọọmentị amalitelarị atụmatụ iji belata nsogbu ego ozugbo, gụnyere enyemaka ndị ọrụ, ezumike ụtụ isi, mgbazinye ego ọmụrụ nwa, ịchọrọ ego, na ego ndị na-achụ ego. N'okpuru ndokwa dị ugbu a, onyinye dị ukwuu nke UNWTO na mpaghara a kwesịrị ịbụ iji nyochaa echiche nke atụmatụ dị otú a, kesaa usoro kacha mma, ma nye ndụmọdụ ebe o kwesịrị ekwesị. M ga-achọ inwekwu enyemaka site na mkparịta ụka n'etiti ndị isi ụlọ ọrụ na-ahụ maka ego na ngalaba ọha na ndị ọrụ nzuzo.
HE Mai Al Khalifa na-ekwu na achọrọ mmekọrịta chiri anya na Healthtù Ahụ Ike Worldwa (WHO) na ụlọ ọrụ ndị ọzọ nwere ahụ ike ahụike iji hụ na a ga-ekwenye na usoro iwu maka njem na-adịghị ize ndụ na mba ụwa. Mkparịta ụka na WHO kwesịrị ịgba mbọ hụ na ejidere ihe mgbochi njem yana obere usoro nkwado iji nyere ngalaba ụlọ ọbịa aka na-eche ihe ọhụrụ chọrọ gafere ọrụ aka ha yana ikike ego ha.
“Ọ na-esiri ike ịlele oge dị anya,” ka HE Mai Al Khalifa kwuru, “mana anyị nwere obi ike na n'oge ụfọdụ, ọrịa a ga-akwụsị. Anyị nwekwara ike inwe obi ike na nyocha ga-abụ isi ihe dịịrị mmụọ mmadụ na n'ihi nke a n'oge ụfọdụ, a ga-enwe nnukwu ọchịchọ maka ọrụ njem.
“Ihe ọlaọcha nke metụtara ọdachi nke COVID-19 bụ na site n'ike n'ike ọ dọpụtala 'akara na ájá,' na-enye ohere a na-enwetụbeghị ụdị ya iji mezigharị mpaghara ahụ nke ọma na SDGs. Dịka ọmụmaatụ, n'oge ọrịa a na-efe efe, ndị mmadụ emeela njem karịa na mpaghara, ngalaba nke 'nnọchibido' abawanyela. Oge eruola ugbu a ịmalite mkpọsa iji kwado usoro a. Nke a ga - enyere aka ịkwagide usoro akụ na ụba na gburugburu ebe obibi. ”
UNWTO kwesiri ikwado ikike ndi otu nwere ike itinye ndi njem njem nlebara anya na atumatu mgbochi ihe ize ndụ nke obodo, kwuru Mai Mai Al Khalifa. O doro anya na, ikike UNWTO nwere iji meghachi omume nke ọma na nsogbu na-egbochi ugbu a site na enweghị ego zuru oke. N'ịbụ ndị usoro ihe ịga nke ọma ndị ọzọ na-eduzi n'ime usoro UN (dịka ọmụmaatụ World Heritage International Assistance Scheme), ọ na-atụ aro mmepe nke UNWTO Assistance Fund iji kwado ndị otu zuru oke na ndị mmekọ nke UNWTO iji gboo nsogbu mberede. HE Mai Al Khalifa kwuru na ya enweela ihe ịga nke ọma na ọrụ ya ugbu a na ịchekwa mgbazinye ego ọmụrụ nwa ogologo oge na enyemaka sitere na ụlọ akụ na ụlọ ọrụ na-ahụ maka ọnọdụ metụtara ọnọdụ ndị a. Nkà ya na mmasi ya ga-aga ogologo oge iji wughachi njem nleta site na ntọala nke World Tourism Organisation.